GAZETY BOKY TRANDRAKA 02: Mampibaribary ny endriky ny kolikoly hita amin’ny seha-panjakana. | déliremadagascar
GAZETY BOKY TRANDRAKA 02: Mampibaribary ny endriky ny kolikoly hita amin’ny seha-panjakana.
Mandrafitra ny gazety boky TRANDRAKA laharana faharoa ny lahatsoratra miisa sivy nosoratan’ireo mpanao gazety avy amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara. Miompana amin’ny fomba fisehoan’ny kolikoly hita eny anivon’ny seha-panjakana isan-tsokajiny ny fanadihadiana lalina nataon’izy ireo. Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny zoma 15 desambra 2017, teny Talatamaty ny TRANDRAKA 02. Nozaraina tamin’io fotoana io ihany koa ny mari-pankasitrahana an’ireo mpanao gazety nahavita fiofanana. Anisany nahazo izany sy nanao fanadihadiana lalina ny mpanao gazety ny De Lire Madagascar (www.deliremadagascar.com), Nirina RAKOTOMIARINTSOA.
Mbola hitohy amin’ny taona 2018 ny fampiofanana ireo mpanao gazety hahay hifehy ny fanadihadiana lalina. Hifantoka amin’ny fanjakana tsara tantana sy zon’olombelona indray ny lohahevitra amin’ny andiany fahatelo sy fahefatra.
Fiarahamiasan’ny UNESCO amin’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM) sy ny Ministeran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana (MCRI) ity tetikasa ity. Mamatsy vola ny tetikasa IDIRC ny « Fonds pour la Consolidation de la Paix ». Mba ho orinasan-tseratsera manaitra ny sain’ny mpitondra fanjakana handray ny andraikiny manoloana ny fomba fanao tsy mendrika ataon’ny tomponandraikim-panjakana sasantsany sy ireo manodidina azy ka mambotry firenena no tanjon’ny tetikasa.